Mushandirapamwe Wakaponesa Vanhu Muguta reTabasco, kuMexico
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malay Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Mushandirapamwe Wakaponesa Vanhu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mushandirapamwe Wakaponesa Vanhu
Nemhaka yekuwedzera kwenhamba yevanhu vari kuzviuraya muTabasco, kuMexico, muna 2017 Zvapupu zvaJehovha zvakaronga mushandirapamwe wemwedzi miviri wekupa vanhu Mukai! yaMay-June 2014 yaiva nemusoro wekuti “Chandinoraramira Chii?—Zvikonzero Zvitatu Zvokuti Urambe Uchirarama.” Vanhu vakatenda chaizvo mushandirapamwe uyu.
Rubatsiro Rwakauya Panguva Yakakodzera
Chimwe Chapupu chaJehovha chinonzi Faustino, chakataura nemukadzi ainetseka nezvemwanakomana wake aiva nemakore 22. Mukomana wacho airwara nedepression zvekuti akamboedza kuzviuraya. Amai vacho vaishaya kuti vomubatsira sei. Asi pavakapiwa magazini yacho naFaustino, vakati, “Ndizvo chaizvo zviri kudiwa nemwana wangu izvi.” Mangwana acho, Faustino akashanyira mwana uyu ndokukurukura mazano eBhaibheri ari mumagazini iyi. Pashure pekumushanyira kwemazuva akati kuti, mukomana uyu akatanga kuchinja maitiro ake. Faustino anoti, “Iye zvino ati sunungukei uye ava kufara.” Anoudzawo mukoma wake uyo ari kurwarawo nedepression, zvaari kudzidza.
Karla, uyo anogara muguta reHuimanguillo, akapawo mumwe musikana waaidzidza naye magazini iyi. “Musikana uyu aiva nemakore 14 uye ndakacherechedza kuti akanga akasuwa,” anodaro Karla. “Ndakataura naye akabva anditsanangurira zvaiitika kumba kwavo. Pataitaura, ndakaona kuti aiva nezvironda paruoko rwake rwekuruboshwe.” Musikana wacho aigara achizvicheka maoko nemakumbo. Aizviona seakashata uye aiona sekuti upenyu hwake hauna chinangwa. Karla akamupa Mukai! Paakaiverenga, akaudza Karla kuti magazini yacho yakanyorerwa iye. Achinyemwerera, akamuudzawo kuti iye zvino akanga ava nechikonzero chekurarama.
Muguta reVillahermosa, mumwe murume aishaya kuti oita sei. Basa rakanga rapera, uye mudzimai wake akamutiza achibva asiya vana. Akanyengetera kuti Mwari amubatsire asi aingonzwa sekuti hapana chiri kuchinja. Akanga ava kutoda kuzviuraya, Martín naMiguel vachibva vagogodza padhoo rake. Murume wacho akavhura dhoo, achibva apiwa Mukai! Paakaona musoro wayo, akaona sekuti Mwari akanga apindura munyengetero wake. Martín naMiguel vakamunyaradza nemavhesi ari muBhaibheri uye pavakazodzoka, vakamuwana ava kunzwa zviri nani. Iye zvino vava kudzidza naye Bhaibheri kaviri pavhiki.
Vasungwa Vanonzwa Mashoko Akanaka
Pamushandirapamwe uyu, Zvapupu zvakashanyira majeri akawanda ari muTabasco kuti zviudze vasungwa mazano eBhaibheri anogona kuvabatsira kuti vave nechinangwa muupenyu. Zvapupu zvakagadzirira mharidzo yaisanganisira mavhidhiyo, mharidzo yeBhaibheri, uye mazano aiva muMukai! iyi. Vasungwa nevashandi vepajeri vakatenda chaizvo kushanya uku. Semuenzaniso, mumwe musungwa akati: “Ndakaedza kuzviuraya katatu. Vamwe vanhu vaindiudza kuti Mwari anondida, asi havana kumboshandisa Bhaibheri kuti vandiratidze kuti zvavaitaura zvaiva zvechokwadi. Mashoko enyu andikurudzira chaizvo.”
Vakawanda vakaziva nezvemushandirapamwe uyu. Munyori webazi rezveutano akatenda Zvapupu nezvavakaita pakubatsira vanhu, uye rimwe pepanhau rakabudisa nyaya yaitaura nezvemushandirapamwe wacho yaiva nemusoro wekuti “Vari Kurwisa Dambudziko Rekuzviuraya.”
Ona zvakaipira kuva nedepression uye kuti Bhaibheri ringakubatsira sei.